पोखरामा उपचार नपाएर छ्टपटिदै ७५ वर्षीय बृद्धा,कसले गर्ला सहयोग?महानगरको ध्यान कहिले पुग्छ ? – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. पोखरामा उपचार नपाएर छ्टपटिदै ७५ वर्षीय बृद्धा,कसले गर्ला सहयोग?महानगरको ध्यान कहिले पुग्छ ? – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
पोखरामा उपचार नपाएर छ्टपटिदै ७५ वर्षीय बृद्धा,कसले गर्ला सहयोग?महानगरको ध्यान कहिले पुग्छ ?
पोखरा जस्तो शहरमा एकजना मानिस उपचार नपाएर छट्पटिएको समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्दा हामीलाई पनि निकै दुख लागि राखेको छ । कहा छ महानगरपालिका? कहा छन् राजनीतिक दलका बरिष्ट नेताहरु , मेयर ,उपमेयर लगाएत महानगरको नजर कता छ ? उहाकै घरको दैलो भन्दा मुनी कुद्ने नेताहरुको ध्यान यहा किन पुग्न सकेन ? स्थानीए सरकार अर्थात वडा कार्यालय के गर्दै छ ?
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २६ जल्धारेमा कृष्ण गिरी नाम गरेका बृद्धा बुवाको एकदमै नाजुक अवस्था रहेको छ। अन्दाजी ७५ वर्ष काटी सक्नुभएको बुवा अहिले एउटा घरमा एक्लै बस्दै आउनुभएको छ। पछिल्लो समय उहा पायल्सको बिरामी हुनुहुन्छ र बृद्धा बुवाको यतिबेला साहारा कोहि पनि छैनन्। एक्पाली अप्रेशन गरिसक्नु भएका बुवाको अप्रेशन असफल भएपछी अहिले उहा जीवन म”रणको अवस्थामा हुनुहुन्छ । उहाको घाउ पाकेको अवस्थामा रहेको र पिप बगिरहेको छ ।
युवा अवस्थामा भारतको बिभिन्न ठाउमा कामको शिलशिलामा घुमिसक्नु भएको रहेछ। देश तथा विदेश सबै थाहा भएका बुवा अहिले एक्लै घरमा छटपटाएर बस्नु परेको छ। स्थानिएका अनुसार उहाको पाईल्स पनि बिग्रिएको छ भने उहा गाउमा नाङ्गै अर्थात निरवस्त्र हिड्ने पनि गर्नुहुन्छ। खानाको लागि गाउले उहालाई सहयोग गरेको छ भने बस्नको लागि उहाको एउटा सानो २ कोठाको घर रहेको छ। उहाको अवस्था देखेर स्थानीए यसो भन्छन “जिन्दगीमा पैसा भन्दा ठुलो केहि हुदैन रहेछ , रोग लागेपछि सबैको हेला हुनुपर्ने रहेछ।
उहाको लागि यतिबेला सहयोगको आवश्यकता रहेको छ। उहालाई तत्काल अस्पतालमा लगेर नया जीवन प्रधान गर्नु नै ठुलो सेवा हुनेछ। गाउमा कोहि आफुलाई आएर अस्पतालमा उपचार गर्न लैजान्छ कि भनेर बाटो हेर्दै हुनुहुन्छ।
हामीले धेरै कोसिस गरेका थियौ। पछिल्लो समय उहाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिदै गएको छ भने उहाको उपचार तत्काल नभए उहालाई क्यान्सर पनि हुनसक्ने स्थानिएको भनाई रहेको छ।
७५ वर्षीय बृद्धा बुवालाई बचाउनुनै ठुलो सेवा रहने छ र हामी आशा गरौ हाम्रा दर्शक महानुभावहरुले उहाको उपचारको लागि केहि रकम सहयोग गर्नुहुने छ र बुवालाई नया जीवन दिन सबैले कोसिस गर्नुहुने छ।
नोट : तपाईहरुले गर्नुभएको सहयोग हामी मानव सेवा आश्रम छोरेपाटनलाई हस्तान्तरण गर्ने छौ र बुवाको उपचार गराउनको लागि आश्रमको सहयोगमा उहालाई नया जीवन दिने कोसिस गर्ने छौ।
सहयोग र थप सलाहको लागि : हाम्रो कार्यालयको नम्बरमा सम्पर्क गर्नसक्नुहुने साथै मनाव सेवा आश्रम पोखरा शाखामा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुने छ। (९८४३३४७६१८ )
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको April 22, 2021 April 22, 2021 718 Viewed